I- sofa ye- Quality soft isebenza ekuhleleni isikhala, ukuhlobisa ne- zonirovat yangaphakathi. Ziyadingeka kunoma yiliphi igumbi, zinikeze ukuphumula okugcwele nokududuza.
Izinhlobo ze-sofas ezithambile
Umsebenzi wefenisha ephakanyisiwe ukuhlinzeka ukuphumula emini, kwezinye izimo - ukulala ngokugcwele. Induduzo eyinhloko inikezwa yi-softholm upholstery.
Isofa elithambile elinemigodi yokuhlobisa liyohlobisa ingaphakathi. Ama-cushions kanye nama-rollers asusiwe iyinto eyengeziwe yokufenisha ifenisha, ikulungele ukunakekelwa, ukusebenza.
I-sofas yekona ephansi yenza ukuba ugcine isikhala esiningi egumbini lokuphumula, bangaqiniseka ukuthi ukwahlukana kwayo okusebenzayo kuyindawo. Ifenisha enjalo yenza indawo yokuphumula ezungeze indawo yokucima umlilo noma phambi kwe-TV ehambisana netafula lekhofi.
Ngosizo lwe- sofas ye-modular elithambile ungashintsha isithombe segumbi lokuphumula, uhlele kabusha izakhi ezindaweni, futhi ulawule isikhala samahhala.
I-sofa eqondile imibhede ingaba nemimoya eqondile yejometri noma ukugoba okulingizayo kwezingalo ze-armrest nama-backrests. Kulula ngokushelelayo, ziguqulwa zibe umbhede owengeziwe, uma kunesidingo esinjalo.
I-soft sofas yekhanda - ithuba elihle kakhulu lokugcizelela ukunethezeka nokubonakala kwendawo yangaphakathi. Umhlophe, omnyama, omnyama uzobukeka ngokuvumelana ngesitayela se-classic noma se-minimalist.
Imikhiqizo yokuguquguqula isefenisha yekhaya ekhululekile. I-sofa yokunamathisela esithambile enekhwalithi yekhwalithi iyoba yindawo yokulala egcwele, kuyilapho izosindisa isikhala futhi isebenze imisebenzi yesihlalo ntambama.
I-sofa ekhishini elithambile izokusiza ukuhlela indawo yokudlela ethokomele ekamelweni. Kungenziwa kufakwe eduze kwefasitela eduze kwetafula lokudlela noma usethe phakathi kwekhishi elihlangene nendawo yokulala yokuhlukaniswa okubonakalayo ekamelweni.
Ukuhluka kwefenisha enjalo kungaba nge-armrests noma ngaphandle, ngokuvamile kugcwaliswa nge-drawer noma isembozo sokuphakamisa. Esikhathini sofa ekhishini kungcono ukugcina izitsha zasekhishini noma izinto ezincane zasendlini.
Sofas ezithambile zanamuhla ziyinkimbinkimbi futhi zihlelekile. Ngisho nefenisha eyodwa enjalo ingabeka ithoni ukuze ingene ngaphakathi kwekamelo.
I-Sofa - umsunguli wenduduzo nobudlova endlini. Kuyo ungakhululeka, uthathe umhlalaphansi, ulale noma uthathe izivakashi.
Ithebula elilandayo ngezandla zomuntu siqu
Ungabamba kanjani ibhodi le-skirting ephahleni?
Ithebula elisekhishini elongeziwe
Ingaphakathi ekamelweni lokulala - iphepha lodonga
I-Class of laminate
Amantongomane ase-Italian ngaphakathi
Ukugoqa ukushisa okushisayo
Ungenza kanjani umbhede obhekile ngezandla zakho?
Ama-sliding partitions ekamelweni
Izinzuzo zePersimmon zokulahlekelwa kwesisindo
UCristiano Ronaldo uqinisekise ukuzalwa kwamawele
Kubiza okungakanani ukusabalalisa okufakelwayo?
I-MCC yokulahlekelwa isisindo
Ukusikisela kanye namasu okusikisela
Izicathulo zesikole ze-Orthopedic zamantombazane
Amaphephadonga edeskithophu egumbini lokuphumula
Izinto zokuqedela ukuqedela isicabha
Yini indoda efile ephupha ngayo?
Umyeni washiya osemncane
Dysplasia in izinja
Indlela yokusika ugarlic for storage?
Izibhuzu ezimhlophe zezinwele zomshado
Isithombe segumbi lokuphumula
AmaJackets The North Face
Iklabishi elondayo - okuhle nokubi
Inkukhu iphosa kuhhavini
Salo, usawoti ngendlela eyomile
Imaski yezipikili - usizo olusebenzayo ekhaya